Xaqa qaxooti ahaan loo leeyahay taageero waxbarasho oo swiidhish ah
Deyn gaari wadid
Deynka guri qalabeysiga
Haddii aad qaxooti tihid waxaad sidoo kale xaq lahaan kartaa in aad CSN lacag ka deynsatid si aad alaab iyo qalab kale guriga ugu soo iibsatid. Waxaa taas loogu yeeraa deynka guri qalabeysashada.
Mararka ay xaaladdu sidan tahay ayaad caadi ahaan xaq u lahaan kartaa taageero waxbarasho oo swiidhish ah:
Haddii Laanta socdaalku ay sharci degganaasho kugu siisay in aad qaxooti tihid ama si kale badbaado ugu baahantihid awgeed.
Haddii laanta socdaalku ay sharci degganaasho kugu siisay xaalado si gaar ah loogu garaabi karo awgood.
Haddii laansta socdaalku ay degganaasho kugu siisay si waafaqsan sharciga ku meelgaar ahaan u xaddidaya fursadaha ku aaddan in sharci degganaasho Swiidhan laga helo. Shariga degganaashada ee loogu tala galay u dhigashada dugsiga sare si waafaqsan xeerka dugsiyada sare ayaa tusaale ahaan sharci noocaasa ah.
Haddii gurig-qoys laguugu meeleeyay ama xarun ay leedahay he’ad dowladeed (HVB-hem), xaq caadi ahaan waad u leedahay taageero waxbarasho oo swiidhish ah. Markaasna waa in aad
Ka hooseysaa 20 sano
Haysataa sharci degganaasho oo shaqeynaya
Haysataa go’aan hey’ad dowladeed ka soo baxay oo muujinaya in meeshaas laguugu meeleeyay.
Sharciga degganaashadu waa in uu shaqeeyaa
Sharciga degganaashadu waa in uu yahay mid shaqeynaya, laakin wax micno ah mal aha haddii uu yahay mid joogto ah ama mid ku meel gaar ah. Xaqa loo leeyahay taageerada waxbarashadu waxay ugu horreyn shaqeynayaa laga billaabo usbuuca aad sharciga qaadatid.
Adigaaga shaqo la’aanta ah waxaad CSN ka deynsan kartaa lacag si aad ku qaadatid leysin gaari wadid oo swiidhish ah oo ah kan gawaarida yar-yar lagu wadan karo ee B. Marka leysin gaari wadid la haysto wey fududaan kartaa in shaqo la helo marka la barbar dhigo marka aan la haysan.
Si aad deynka xaq ugu yeelatid waa in aad shaqo la’aan tihid, una dhexeysid 18 iyo 47 sano. Taasi ma wada khuseyso dadka shaqo la’aanta ah, ee waa in aad buuxisaa shuruudo go’an. Ugu badnaan waxaad deynsan kartaa 15 000 oo koron. Deynka waa in aad gadaal dambe ka soo celisid, waana in aan taas sameysaa xitaa haddii aadan leysin qaadan.
Adigaaga ku jira qaabilaadda qaxootiga ee degmooyinka waxaad CSN ka deynsan kartaa lacag si aad alaab iyo qalab kale ugu soo iibsatid guriga. Waxay noqon kartaa sariirro, saxaman, digsiyo iyo kuraas. Laakin maaha tusaale ahaan cunto, warqadaha musqusha ama kirada guriga in aad u isticmaashid. Deynka waxaa loogu yeeraa deynka guri qalabeysashada.
Inta aad deynsan kartid waxay ku xirantahay inta uu qoyskaagu ka koobanyahay, waxa horbaba guriga kuu yaalla iyo inta lacag ah ee aad horbaba deynsatay.
Waxaad u baahantahay in deynka guri qalabeysiga aad dib usoo celisid ka dib marka aad Swiidhan muddo deganaatid. Waxaad lacag soo celinta billaabeysaa 2 sano ka bacdi laga billaabo maalinti lacagti ugu horreysay laguu soo shubay.